အသစ်ထွက် Vivo Y20s တွေ ICT.com.mm မှာ ဝယ်လို့ရနေပြီနော် ~ The ICT.com.mm Blog
အသစ်ထွက် Vivo Y20s တွေ ICT.com.mm မှာ ဝယ်လို့ရနေပြီနော်
အသစ်ထွက် Vivo Y20s တွေ ICT.com.mm မှာ ဝယ်လို့ရနေပြီနော်…
Vivo Y20s ဟာဆိုရင် AI Triple Macro Camera, 2MP Bokeh Camera, Super Macro Camera စတဲ့ Camera mode မျိုးစုံပါလို့ အနီးကပ်ဆုံး 4cm အောက်ထိ Zoom ဆွဲရိုက်မလား? ကြည်လင်ပြတ်သတ်တဲ့ portrait တွေပဲရိုက်မလား? ပုံရိပ်ကောင်းတွေ ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်လို့ နာမည်ကြီးတယ်နော်။
Octa-core CPU နဲ့ Qualcomm Snapdragon 460(11 nm) Chipset ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အပြင် RAM4GB/ 128 GB internal storage တို့ကို ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Brand-new Esports Mode ဖြစ်တဲ့ Ultra Game Mode ကို ထည့်သွင်းပေးထားလို့ game action တွေတိုင်းမှာ ပရိုဆန်ဆန် lag ခြင်းရှိဘဲ အေးဆေးဆော့နိုင်ဦးမှာနော်။
လူငယ်ဆန်ဆန် အရောင်ဆန်းလေးကိုမှ Purist Blue နဲ့ Nebula Blue ဆိုပြီး ရွေးချယ်စရာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်နော်။ မျက်နှာပြင် 6.51 inches (Halo FullView Display) နဲ့ Vivo Y20s (4GB/128GB) ကို K279,800 နဲ့ ဒီအောက်ကလင့်ခ်ထဲမှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ…
Vivo Y20s Purist Blue (4GB/128GB),
Shop here: https://www.ict.com.mm/products/vivo-y20s-purist-blue-4gb-128gb-24
Vivo Y20s Nebula Blue (4GB/128GB)
Shop here: https://www.ict.com.mm/products/vivo-y20s-nebula-blue-4gb-128gb-24
Newer ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံးအတွက် Laptop ကို ရှာနေပြီဆိုရင်တော့ ICT.com.mm မှာ Lenovo ThinkPad L14 (i3-10th Gen) ရှိတယ်နော်
Older i5-10th gen Processor ထဲက Acer Aspire 5G A515 တွေ ICT.com.mm မှာ stock အသစ်တွေထပ်ရောက်လာလို့ ဝယ်လို့ရပါပြီနော်